Duulimaadyada cusub ee San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam iyo London ee Air Transat hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada cusub ee San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam iyo London ee Air Transat hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadyada cusub ee San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam iyo London ee Air Transat hadda.
Marka la falanqeeyo isbeddellada safarka, waxaa cad in Mareykanka uu weli yahay mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee loo tago Quebecers iyo Canadianka ka dib masiibada.
Air Transat waxay ku balaarineysaa barnaamijkeeda Mareykanka oo leh laba goobood oo cusub, Los Angeles iyo San Francisco, iyo sidoo kale duulimaadyo sanadka oo dhan ah Florida.
Air Transat waxay ku dhawaaqday adeeg aan joogsi lahayn inta u dhaxaysa Montreal - Amsterdam iyo Quebec City - London.
Duulimaadka Montreal-Amsterdam wuxuu socon doonaa saddex jeer todobaadkii iyo duulimaadka Quebec City – London, hal mar todobaadkii.
Air Transat ayaa ku dhawaaqday in afar waddo oo cusub lagu dari doono barnaamijkeeda duulimaadka xagaaga 2022. Markii ugu horeysay abid, diyaaraddu waxay u adeegi doontaa garoomada San Francisco, Los Angeles iyo Amsterdam ee Montreal. Intaa waxaa dheer, waxay bixin doontaa duulimaad toos ah oo gaar ah oo u dhexeeya Quebec City iyo London, iyada oo xoojinaysa doorkeeda sida hormuudka caalamiga ah ee ka yimaada Gegida Diyaaradaha ee Jean-Lesage. Ugu dambeyntii, Air Transat waxay ku shaqeyn doontaa waddooyinka Fort Lauderdale iyo Miami sanadka oo dhan.
"Marka la falanqeeyo isbeddellada safarka, waxaa cad in Mareykanka uu weli yahay mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee Quebecers iyo Canadianka ka dib masiibada. Waad ku mahadsan tahay bad-qabka maraakiibteena heerka caalami, waxaan si fiican ugu taagannahay inaan daboolno baahidan oo aan si dhakhso ah ula qabsano baahiyaha rakaabkayaga, waana sababta adeegeena koonfurta xudduudda ay sii ballaarin doonto laga bilaabo 2022, "ayuu yiri Annick Guérard, Madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee Air Transat.
Air Transat waxay kor u qaadaysaa barnaamijkeeda duulimaadka ee Maraykanka iyadoo lagu daray California. Duulimaadka Montreal – San Francisco waxa la shaqayn doona laba jeer todobaadkii, halka duulimaadka Montreal – Los Angeles uu socon doono saddex jeer todobaadkii.
Baahida joogtada ah ee duulimaadyada ku socda awgeed Florida, wadooyin gaar ah oo hore loo heli jiray oo kaliya xilliga jiilaalka ayaa hadda la bixin doonaa sanadka oo dhan. Inta lagu jiro xagaaga, duulimaadka Montreal - Miami waxaa la shaqeyn doonaa seddex jeer todobaadkii iyo Quebec City - duulimaadka Fort Lauderdale, hal mar todobaadkii.
Isla markaana ay shirkaddu adeegeeda Yurub ku kordhinayso iyada oo adeeg toos ah ku soo kordhinaysa laba qaybood oo kala ah Holland iyo Boqortooyada Ingiriiska, taas oo ka dhigaysa Air Transat diyaaradda kaliya ee Kanadiyaanka ah ee si toos ah uga soo duusha magaalada Montreal ee dalka Holland.